फोटोफिचर | Nagarik News - Nepal Republic Media
ललितपुरको बिशुडोलमा धान भित्र्याउने चटारो (फोटोफिचर)
ललितपुरको बिशुडोलमा किसानलाई पाकेको धान भित्र्याउने चटारो छ। उनीहरु धान काट्न खेतमा काममा जुटेका छन्।
दिपेश श्रेष्ठ ७ कार्तिक २०७८ आइतबार १ मिनेट पाठ
सिलिण्डरमा अक्सिजन भर्दै मजदुर (फोटोफिचर)
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण उच्च भएसंगै अक्सिजनको अभाव देखिएको छ।
विजय राई १५ वैशाख २०७८ बुधबार १ मिनेट पाठ
कर्णाली बैशाख महिनामा हिउँले ढाकियो (फोटोफिचर)
यो वर्ष कर्णालीमा बैशाख महिनामा हिउँ परेको छ। पालुवा पलाएर जताततै हरिया भइसकेको बेला हिउँले ढाकेर सेताम्य भएको हो।
धनबहादुर बुढा ९ वैशाख २०७८ बिहीबार २ मिनेट पाठ
चुमन बस्नेत १६ चैत्र २०७७ सोमबार १ मिनेट पाठ
पुष्प व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि गरिएको पुष्प प्रदर्शनीको अन्तिम दिन सोमबार देशभरका विभिन्न व्यक्तिहरूले मेलाको अवलोकन गर्दै फूलहरूको बारेमा जानकारी लिए।
नागरिक ३ वैशाख २०७५ सोमबार १ मिनेट पाठ
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि क्षेत्रका बासिन्दाले आइतबार विहान हर्षोल्लासका साथ सिन्दुरजात्रा अर्थात सुथःसिया जात्रा मनाएका छन्। जात्रामा केटाकेटीदेखी बृद्धबृद्धाको समेत सहभागिता रह्यो।
नागरिक २ वैशाख २०७५ आइतबार १ मिनेट पाठ
दैनिक कामको तनाबबाट मुक्त हुन सहरबाट केही टाढा निस्कने प्रचलन हिजोआज बढ्दै गएको छ। मनोरञ्जनका लागि लगानीमा बढोत्तरी गर्न उत्साहित हुनेक्रम देखिन थालेको छ। यहि क्रममा पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको रानीटारमा जानेको संख्या उलेख्यमात्रमा बढ्न थालेको छ।
गिरिराज बाँस्कोटा ३० पुस २०७४ आइतबार ३ मिनेट पाठ
डा. केसी पक्राउको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा उनको रिहाईको माग गर्दै समर्थकहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि माइतीघर मण्डला डा. केसीको गिरफतारीविरुद्ध उनका समर्थकहरुले प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाएका थिए ।
स्मृति ढुंगाना २५ पुस २०७४ मंगलबार १ मिनेट पाठ
यौन हिंसाविरुद्ध गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा अभिनेत्रीहरु (फोटोफिचर)
अभिनेत्री निकोल किडम्यानले ‘बिग लिटल लाइज’ बाट ‘ यसवर्षको गोल्डेन ग्लोब अवार्ड २०१८ मा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी छिन् । उनको ‘बिग लिटल लाइज’ले उत्कृष्ट अभिनेत्रीसहित चार विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको थियो । गत आईतबार राति क्यालिफोनियामा आयोजित ७५ औं गोल्डेन ग्लोब अवार्ड वितरण कार्यक्रममा ‘थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिङ, मिजोरी’ले उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जितेको थियो । यसवर्षको ‘सेसिल बी डिमिली अवार्ड’ भने प्रस्तोता ओपरा विनफेरीले हात पारेकी थिइन् ।
नागरिक २४ पुस २०७४ सोमबार ५ मिनेट पाठ
चिसोमा कष्टकर दैनिकी गुजार्दै भूकम्प पीडित (फोटोफिचर )
महाविनाशकारी भूकम्प गएको बीस महिना बितिसक्दा पनि सहयोग नपाएपछि सहलकोटका भूकम्प पीडितको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ। गाउँमा प्राय सबै घरका मानिसमा कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छ। धेरैलाई निमोनिया, जण्डिस, दम, झाडापखाला तथा रुखाखोकीको समस्याले ग्रसित भएका छन्।
मुक्तिप्रसाद न्यौपाने २५ पुस २०७३ सोमबार ६ मिनेट पाठ